Ndokunge tigere zvedu pamusuwo weNational Gallery yeZimbabwe muHarare. Ndaivepo ndine munyori wenyaya pfupi Memory Chirere. Apa taipanana zvedu mabhuku nemashoko akakosha sevanyori. Taitotaura nezveuko taigona kuendesa zvinyorwa uye kuti iyo ndima yezveuvaranomwe yakamira sei muZimbabwe mazuva ano. Taiseka zvedu pahusahwira apo takaona mukuru anozivikanwa nezvekunyora mitambo yekuedzesera, Stephen Chifunyise asvika paNational Gallery. Takamusumudzira maoko iye ndofamba ouya pataive. Steve Chifunyise anozivikanwa zvikuru semunyori wemitambo yekuedzesera yakatambirwa munzvimbo zhinji dzinosanganisira kuTheatre in The Park muHarare. Pakasvika mukuru uyu takambokurukura nezvemutambo wake waakanyora unonziRoki and Maneta Encounter, uyo wainge uchikutoonekwa paTheatre in the Park pamazuva iwayo. Takanakirwa tichiudzwawo maonero aiita mukuru uyu nyaya yaRoki naManeta iyi. Tiri mukukurukura umu ndimo makazonzi nomumwe wangu Chirere,'Nhai vaChifunyise, nguva yekunyora mitambo yose iyi mun…
Dzimwe nguva nhema dzatinosangana nadzo muhupenyu hwedu dzinonditambudza. Apo ndange ndichida zvangu kukwira kombi kuti ndipinde muguta, mukomana anga achisheedzera kuti vanhu vakwire kombi yake ange achisheedzera achiti, ‘Huyai mukoma. Yazara. Handei. Yazara.’ Ndafamba ndichienda kukombi yake ndichida kuti ndimubvunze kuti ko kana yazara arikundidaizireiko, ndipo pandaona kuti kombi yake yange ine vatakurwa vatanhatu. Apa iye anenge achida vamwe gumi nevaviri kuti kombi yake inzi yazara. Ndamubvunza kuti sei achinyepera vanhu, iye ndokuti, ‘ibasa mudhara! Ndikasadaro vana vanofema mhepo kumba uku.’ Izvozvo vanhu vanga vakuuya vachipinda mukombi yake iye achienderera mberi nokusheedzera kuti yazara. Ndaramba kupinda mukombi yake. Ndamuudza kuti handipindi mukombi yemunhu anonyepa. Vamwe vatakurwa vanga vari mukombi vandiseka. Vanditukavachindipomera mhosva yekushaya chekumhanyira uye zvokuita mudhorobha. Vanga vachitonditi dai ndine chekumhanyira ingadai ndapinda mukombi ine munhu an…